AMISOM oo cadaysay inay Duulaan ku yihiin Degmada Baraawe | Wardoon Wardoon.net - Somali News
AMISOM oo cadaysay inay Duulaan ku yihiin Degmada Baraawe
Taliyaha ciidanka milatariga ee AMISOM Silis Ntaguru oo la hadlay Warbaahinta ayaa daboolka ka qaaday in Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ay saacado gudaheeda ku qabsan doonaan Degmada Baraawe.
Silis Ntaguru oo Shir Jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa shegay in ciidanka amisom ay qarka u saaran yihiin magaalada Baraawe waxa uuna sheegay in saacadaha soo aadan ay lawareegi doonaan gacan ku heynta magaaladaasi.
Sidoo kale, Benson Meyko oo ah Taliye ku-xigenka ciidanka police-ka ee Amisom oo isna hadlay ayaa carabka ku dhiftay in deegaanadii dhawaan ay ciidanka dowlada iyo Amisom lawareegeen lageyn doono ciidan Police ah oo ka socda Amisom si buu yiri loo sugo amaanka deegaanadaasi.
Dhanka kale, haddalka Taliyayaasha ayaa kusoo beegmaaya Xili dhaq dhaqaaqyo ciidan laga soo sheegayo degaano katirsan Gobolka Sh/hoose islamarkaana inta badan dadka ku dhaqan hareeraha degmada baraawe ee gobolkaas ay bilbabeen in ay isaga barakacaan.
Maanta ayay aheyd markii la shaaciyay in Xoogaga Alshabaab ay faarujiyeen Degmada Baraawe waxaana xigay haddalka Taliyayaasha Ciidamada.